ရီးရဲလ်အသင်း ပုံစံကောင်းပြန်ရနေပြီလား | FOX Sports Myanmar
စီရော်နယ်ဒိုမရှိတော့ပေမယ့်လည်း ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းကတော့ ပုံစံကောင်းတစ်ခုနဲ့ လာလီဂါမှာ ရှေ့ဆက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။
ဘာနေမျူးမှာ သမိုင်းမှတ်တမ်းတစ်ခုရေးထိုးခဲ့တဲ့ စီရော်နယ်ဒိုမရှိတော့ပေမယ့် ရိးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းကတော့ နောက်ထပ်ကစားသမားတွေနဲ့တူ နာမည်ကောင်းတွေ ဆက်လက် ရရှိဖို့ စိုင်းပြင်းနေပါပြီ။
စီရော်နယ်ဒိုဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်း ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာ အောင်မြင်တဲ့ ကစားသမား ဘဝကို တစ်စထက်တစ်စပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ ပုံရိပ်ကြီးမားမှု အတိုင်းပဲ စီရော်နယ်ဒိုရဲ့ နာမည်တစ်ခုဟာလည်း ကြီးစိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ စီရော်နယ်ဒိုဟာ အသင်းရဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ဒီထက်ပိုတဲ့ ဘဝစာမျက်နှာတစ်ခုဖွင့်ချင်တဲ့ စီရော်နယ်ဒိုကတော့ ဂျူဗင်တပ်စ် အသင်းကို ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ။် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အသင်းဥက္ကဌ ပီရက်ဇ်ကို ထောက်ညှာတဲ့အနေနဲ့ စီရော်နယ်ဒို ထွက်ခွာချိန်မှာ လူသိရှင်ကြား နှုတ်ဆက်ပွဲမပြုလုပ်ခဲ့ပါဘူး။
သွားတဲ့လူလည်းသွားခဲ့ပြီးပါပြီ။ မေ့ထားလို့ရပါပြီ။ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ အနာဂတ်ကရော ဘယ်လို ဖြစ်လာမှာလဲ?
စီရော်နယ်ဒိုထွက်ခွာသွားချိန်မှာ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာ အမ်ဘာပီ ၊ နေမာတို့ကို ပြန်ခေါ်ဖို့ လုပ်ခဲ့ ပါသေး တယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း PSG အသင်းက သူတို့ကစားသမားတွေကို အထိမခံခဲ့ပါဘူး။ နောက်ဆုံးမှာ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာ မြင့်မားတဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ ကစားသမား တစ်ယောက်ကို ပြန်ခေါ်မလား ၊ ရှိနှင့်နေပြီးသား ကစားသမားတွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ အဓိက ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း အသင်းက တင်ရှိနေတဲ့ အကြွေးတွေရှိနေတာကြောင့် ကစားသမား ဝယ်ယူမှု အပိုင်းမှာ အတော်လေး ခြိုးခြံချွေတာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
စီရော်နယ်ဒိုထွက်ခွာခြင်းက ဂါရက်ဘေးလ်နဲ့ ဘန်ဇီမာကို နေရာပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ အေဆန်စီယိုဟာလည်း ခြေစွမ်းပြကစားလာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ် အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ဟာ တောင့်တင်းလာခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချိန်က စီရော်နယ်ဒိုကို အဓိက အားပြုပြီး ကစားခဲ့တဲ့ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာ အသင်းလိုက်စုစည်းမှုအားကောင်းတဲ့ အသင်းတစ်သင်း ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိချိန်မှာ အဖိုးတန်လက်နက်တွေသဖွယ်ဖြစ်နေတဲ့ ဘန်ဇီမာ ၊ ဂါရက်ဘေးလ် ၊ အေဆန်စီယို ၊ မာဆယ်လို တို့ရဲ့ စုစည်းမှုအားတွေနဲ့အတူ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာ စပိန်မြေမှာ အောင်လံလွှင့်ဖို့ ကြိုးစားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကမ္ဘာ့ဖလားကပြန်လာတဲ့ လက်စွမ်းပြ ဂိုးသမား ကော်တိုရစ်လည်း ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဟာဇတ် ၊ လူကာဂျိုဗစ်တို့လိုကစားသမားတွေလည်းအသင်းမှာ ရှိနေခဲ့ပေမယ့် ဒီကစားသမားတွေရဲ့ ခြေစွမ်းပိုင်းက လက်ရှိအသင်းအပေါ်မှာတော့ ဘယ်လိုမှမထောက်အကူမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရမှာပါပဲ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘောလုံးအားကစားမှာ တစ်ယောက်ကောင်းနဲ့ ဖွဲ့စည်းလို့မရပါဘူး။ စီရော်နယ်ဒို မရှိတော့တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုမှာ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အနေနဲ့ အကောင်းဆုံးအနေအထား ရှိနေသေး တယ်ဆိုတာကို ဆက်လက်ပြသနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
စီရော်နယ်ဒိုမရြိတော့ပေမယ့်လည်း ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းကတော့ ပုံစံကောင်းတစ်ခုနဲႚ လာလီဂၝမြာ ရြေႚဆက်ိုံင်ခဲ့ပၝူပီ။
ဘာနေမဵြးမြာ သမိုင်းမတ်ြတမ်းတစ်ခုရေးထိုးခဲ့တဲ့ စီရော်နယ်ဒိုမရြိတော့ပေမယ့် ရိးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းကတော့ နောက်ထပ်ကစားသမားတေနြဲႚတူ နာမည်ကောင်းတြေ ဆက်လက် ရရြိဖိုႚ စိုင်ူးပင်းနေပၝူပီ။
စီရော်နယ်ဒိုဟာူပီးခဲ့တဲိံ့စ်ြတေအြတငြ်း ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းမြာ အောင်ူမင်တဲ့ ကစားသမား ဘဝကို တစ်စထက်တစ်စပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပၝတယ်။ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲႚ ပုံရိပ်ုကီးမားမြ အတိုင်းပဲ စီရော်နယ်ဒိုရဲႚ နာမည်တစ်ခုဟာလည်ုးကီးစိုိးုိံင်ခဲ့ပၝတယ် ။ စီရော်နယ်ဒိုဟာ အသင်းရဲႚ အမတ်ြတံဆိပ်တစ်ခုဖစ်လာခဲ့ပၝတယ်။
ဒၝပေမယ့်လည်း ဒီထက်ပိုတဲ့ ဘဝစာမဵက်ြိာံတစ်ခုဖငြ့်ခဵင်တဲ့ စီရော်နယ်ဒိုကတော့ ဂဵဗြင်တပ်စ် အသင်းကို ထက်ြခြာခဲ့ပၝတယ။် ဘာပဲူဖစ်ူဖစ် အသင်းဥက္ကဌ ပီရက်ဇ်ကို ထောက်ညြာတဲ့အနေနဲႚ စီရော်နယ်ဒို ထက်ြခြာခဵိန်မြာ လူသိရငြ်ုကာိးံတ်ြဆက်ပြဲမူပလြုပ်ခဲ့ပၝဘူး။
သြားတဲ့လူလည်းသြားခဲူ့ပီးပၝူပီ။ မေ့ထားလိုႚရပၝူပီ။ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲႚ အနာဂတ်ကရော ဘယ်လိုဖစ်လာမြာလဲ?
စီရော်နယ်ဒိုထက်ြခြာသြားခဵိန်မြာ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာ အမ်ဘာပီ ၊ နေမာတိုႚကိုပန်ခေၞဖိုႚ လုပ်ခဲ့ ပၝသေး တယ်။ ဒၝပေမယ့်လည်း PSG အသင်းက သူတိုႚကစားသမားတေကြို အထိမခံခဲ့ပၝဘူး။ နောက်ဆုံးမြာ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာူမင့်မားတဲ့ေူပာင်းရြေႚေုကးနဲႚ ကစားသမား တစ်ယောက်ကိုပန်ခေၞမလား ၊ ရြိံငြ့်နေူပီးသား ကစားသမားတေကြို ထိန်းသိမ်းဖိုႚ အဓိကူဖစ်လာခဲ့ ပၝတယ်။ တစ်ဖက်မြာလည်း အသင်းက တင်ရြိနေတဲ့ အေုကြးတေရြိနေတာေုကာင့် ကစားသမား ဝယ်ယူမြ အပိုင်းမြာ အတော်လေူးခြိူးခံခေဵတြာခဲ့ရတာူဖစ်ပၝတယ်။
စီရော်နယ်ဒိုထက်ြခြာူခင်းက ဂၝရက်ဘေးလ်နဲႚ ဘန်ဇီမာကို နေရာပေးလိုက်သလိုဖစ်သြားပၝတယ်။ တစ်ခဵိန်တည်းမြာ အေဆန်စီယိုဟာလည်းေူခစမြ်ူးပကစားလိာုိံင်ပၝတယ်။ ဒီလိုနဲႚပဲ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ် အသင်းရဲႚတိုက်စစ်ဟာ တောင့်တင်းလာခဲ့ပၝတယ်။ တစ်ခဵိန်က စီရော်နယ်ဒိုကို အဓိက အာူးပြူပီး ကစားခဲ့တဲ့ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာ အသင်းလိုက်စုစည်းမအြားကောင်းတဲ့ အသင်းတစ်သင်ူးဖစ်လာခဲ့ပၝတယ်။
လက်ရြိခဵိန်မြာ အဖိုးတန်လက်နက်တေသြဖယြ်ူဖစ်နေတဲ့ ဘန်ဇီမာ ၊ ဂၝရက်ဘေးလ် ၊ အေဆန်စီယို ၊ မာဆယ်လို တိုႚရဲႚ စုစည်းမအြားတေနြဲႚအတူ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာ စပိန်ေူမမြာ အောင်လံလငြ့်ဖိုႚုကြိးစားရတော့မြာူဖစ်ပၝတယ်။ ဒၝ့အူပင် ကမ္တာ့ဖလားကူပန်လာတဲ့ လက်စမြ်ူးပ ဂိုးသမား ကော်တိုရစ်လည်း ရောက်ရြိလာခဲူ့ပီူဖစ်ပၝတယ်။ဟာဇတ် ၊ လူကာဂဵိဗြစ်တိုႛလိုကစားသမားတေလြည်းအသင်းမြာ ရြိနေခဲ့ပေမယ့် ဒီကစားသမားတေရြဲႚေူခစမြ်းပိုင်းက လက်ရြိအသင်းအပေၞမြာတော့ ဘယ်လိုမမြထောက်အကူမူဖစ်ိုံင်သေးဘူးလိုႛဆိုရမြာပၝပဲ။
ဘာပဲူဖစ်ူဖစ် ဘောလုံးအားကစားမြာ တစ်ယောက်ကောင်းနဲႚ ဖြဲႚစည်းလိုႚမရပၝဘူး။ စီရော်နယ်ဒို မရြိတော့တဲ့ အေူခအနေတစ်ခုမြာ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အနေနဲႚ အကောင်းဆုံးအနေအထား ရြိနေသေး တယ်ဆိုတာကို ဆက်လက်ူပသိုံင်ဖိုႚလိုပၝတယ်။
Home Football La Liga ရီးရဲလ်အသင်း ပုံစံကောင်းပြန်ရနေပြီလား